Wadashaqeynta Shirkadaha iyadoo la adeegsanayo TWIKI
Wadashaqeynta Shirkadaha iyadoo la adeegsanayo Goobaha Shaqada ee TWiki
Talaado, July 17, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Muhiimadda habsami-u-socodka shaqada iyo isgaarsiinta furan waligood lama soo koobi karo, gaar ahaan adduun weynaha maanta tartamaya ee xawaaraha, kalsoonida iyo xirfad-yaqaannimadu yihiin mantraska guusha. Hase yeeshe ururo badan ayaa ku shaqeeya "dhaqan silo" ah oo aan dhiirrigelin wadaagista macluumaadka dhammaan doorarka, howlaha, ama waaxaha.
Qalabka ay ka mid yihiin Twiki waxay ka caawiyaan shirkadaha sidii ay uga bixi lahaayeen dhaqamada noocaas ah ee iskaashi la'aanta ah.
TWiki® waa mid jilicsan, awood badan, oo si fudud loo isticmaali karo wiki-ganacsiyeed, madal iskaashi ganacsi, iyo barxad codsi websaydh ah. Waa Wiki qaabeysan, oo sida caadiga ah loo isticmaalo in lagu socodsiiyo goob horumarineed oo mashruuc ah, nidaam maareyn dukumiinti, saldhig aqooneed, ama aalad kale oo qalab kooxeed ah, intranet, extranet ama Internet.
TWiki asal ahaan waa wiki qaabeysan, oo u shaqeeya sidii heer shirkadeed Wikipedia ama shabakad warbaahineed oo gudaha ah, iyadoo kuxiran sida ay shirkadu u dooratay inay u adeegsato. Maamulayaashu waxay u isticmaali karaan qalabkan inay dejiyaan mashaariic, maareeyaan dukumiintiyada, dejiyaan intranet, ama xitaa codsi shabakadeed. Twiki sidoo kale waxay u oggolaaneysaa xulashooyinka horumarsan sida Transclusion ama ka mid noqoshada dukumiinti ama qeyb ka mid dukumiinti dukumiinti kale iyadoo la tixraacayo, laga soo qaatay jaantusyo iyo fursado kale oo badan.
U dirista Twiki sidii madal wada shaqeyn ah waxay hubisaa in macluumaadka ay heli karaan kuwa u baahan. Suuqleyda ayaa marin ka heli kara Twiki oo heli kara macluumaadka loo baahan yahay isla markiiba, ama la xiriir qofka loo idmay waqtiga dhabta ah, iyagoo si aad ah u soo gaabinaaya waqtiga nolosha. Wadista howlaha gudaha iyadoo loo marayo Twiki waxay ka dhigeysaa qulqulka xogta iyo macluumaadka mid siman oo aan hagaagsaneyn, taasoo gacan ka geysaneysa wax soo saar kordhay iyo waqtiyada hogaaminta oo gaagaaban.
Twiki waa madal il furan iyaguna waxay leeyihiin xal la martigaliyo. Kuwa doonaya caawimaad farsamo, Twiki ayaa bixisa adeegyada la-taliyayaasha yaa habeyn doona, dayactiri doona oo u habeyn doona Twiki.
Tags: iskaashiiskaashiga shirkadahaiskaashiga kooxdatwikiwiki
Waxaad Tahay Wax Soo Saarkii Facebook
Shan Siyaabood oo Dhaqanka loogu Dhex Galiyo Istaraatiijiyadaada Suuqgeynta